Yikuphi sika inkampani PVC ezemidlalo phansi kungcono? - China Shijiazhuang Yichen Plastic Floor
Yikuphi sika inkampani PVC ezemidlalo phansi kungcono?
PVC ezemidlalo phansi uhlobo phansi ngokukhethekile yenkundla yezemidlalo ngokusebenzisa PVC Materials. Ngokukhethekile, ke kuveza phala enamathela amasu noma calendering enamathela, extruding noma cindezela su, kwi okuqhubekayo ishidi substrate, usebenzisa PVC ne co-polymer inhlaka njengoba izinto zokusetshenziswa main bese ufaka yamathebhu, plasticizer, isimame, colorant nezinye izinto asizayo.
Khona-ke PVC ezemidlalo flooring okuyinto yenkampani kungcono? I ezemidlalo flooring ka Shijiazhuang Yichen Ezemidlalo Plastic Floor Co., Ltd has umbala, iphethini ecacile futhi ukuthungwa, ungqimba esobala futhi isici esihle antislip, ukushaqeka ukumuncwa, njll flooring isidlulile isitifiketi nokuvikelwa kwemvelo, oluhlaza futhi eco imikhiqizo -friendly. Ingasetshenziselwa bezindawo nezimfuneko nokuvikelwa kwemvelo, ezifana eliphezulu traffic endaweni efana esibhedlela, isikole sabaqalayo, njll Futhi, ukufakwa le PVC flooring sika lula kakhulu futhi elula. Kuphela nokuzibona yokululama emisiwe, kubalulekile ingafakwa, futhi ngeke kube khona omkhulu ongcolile nomsindo ngesikhathi sokufakwa.
Shijiazhuang Yichen Ezemidlalo Plastic Floor Co., Ltd., njengoba nje inkampani professional PVC ezemidlalo flooring, has esiqinile izinga ukulawula futhi ephakeme emva-sales service, ukuqinisekisa ukuthi zonke ikhasimende ithola umkhiqizo oqeqeshiwe.
Umkhiqizo Ukuqinisekiswa kwekhwalithi: Imikhiqizo yethu akudingeki umbala umehluko (batch efanayo), onqenqemeni yoboya-lotus leaf onqenqemeni, iqhubu, ukujiya engalingani, iphunga kanye nezinye izinkinga zokungapheleli. Yonke imikhiqizo Yichen zizonikwa isitifiketi abafanelekayo ngaphambi kokushiya endaweni yokukhanda. Futhi ukuthi isiqinisekiso zomkhiqizo ngokwawo ngonyaka 6 (ekugcineni okusezingeni eliphezulu), iminyaka engu-2 ngekhwalithi evamile. (Ngaphandle imikhiqizo ngezifiso ngokukhethekile kanye nokunciphisa izinga okudalwe ukusebenzisa, ukufakwa, ukugcinwa abampofu.)
imikhiqizo eyinhloko Shijiazhuang Yichen Ezemidlalo Plastic Floor Co., Ltd: phansi plastic, PVC flooring, ezemidlalo flooring, UV uchungechunge flooring, eyohlobo njll flooring. Imikhiqizo yethu hhayi kuphela wamukela e emakethe yasekhaya, kodwa futhi oversea emakethe. Yichen phansi has idumela elihle kakhulu nokholo nokubambisana okuhle namakhasimende ethu ezifuywayo kwezilwandle ku izinga umkhiqizo, umsebenzi kanye emva-sales service, njll